ကရင်နီဘာသာစကား - ဝီကီပီးဒီးယား
(ကယားဘာသာစကား မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
eky – အရှေ့ကယား
kyu – အနောက်ကယား
kvy – ယင်းတလဲ
kxf – မနူမနော (မနု၊ ကော်ယော်)
ကရင်နီဘာသာစကား သို့မဟုတ် ကယားဘာသာစကား သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကယားလူမျိုး (ကရင်နီလူမျိုး) ငါးသိန်းကျော် (၅၀၀,၀၀၀ ကျော်) ပြောဆို အသုံးပြုကြသော ကရင်ဘာသာစကားတစ်ခု ဖြစ်သည်။
ကယား ဟူသော ဝေါဟာရသည် အခြားကရင်များမှ ခွဲခြားခေါ်ဆိုရန်အတွက် ဖန်တီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် အရှေ့ကယားဘာသာစကားကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူဦးရေ ၂၆၀,၀၀၀ နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ၁၀၀,၀၀၀ တို့က ပြောဆိုအသုံးပြုကြသည်ဟု ဆိုသည်။ ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် အနောက်ကယားဘာသာစကားကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူဦးရေ ၂၁၀,၀၀၀ ခန့်က ပြောဆိုအသုံးပြုကြသည်။ ယင်းနှစ်ခုသည် ကွဲပြားသော ဘာသာစကားနှစ်ခု ဖြစ်သည်။ အနောက်ကယား၏ ဒေသိယစကားများမှာ ယင်းတလဲ နှင့် မနုမနော တို့ ဖြစ်ကြသည်။
ကယားပြည်နယ်၊ ရှားတောမြို့နယ် (သံလွင်မြစ်၏ အရှေ့ဖက်ပိုင်း)
ရှမ်းပြည်နယ်၊ လင်းခေးခရိုင် တို့တွင် ပြောဆို အသုံးပြုကြသည်။
အရှေ့ကယား ဒေသိယစကားများမှာ အထက်အရှေ့ကယားနှင့် အောက်အရှေ့ကယား တို့ဖြစ်ပြီး အပြန်အလှန် နားလည်နိုင်သည်။ အရှေ့ကယားသည် အနောက်ကယားဘာသာစကားကို နားလည်နိုင်ရန် အခက်အခဲရှိသည်။
အနောက်ကယားဘာသာစကား ကို ကယားပြည်နယ်နှင့် သံလွင်မြစ်အရှေ့ပိုင်းရှိ ကရင်ပြည်နယ်တို့တွင် ပြောဆိုအသုံးပြုကြသည်။ ရှမ်းပြည်နယ် ဖယ်ခုံမြို့နယ်တွင်လည်း ပြောဆိုအသုံးပြုကြသည်။
မြောက်ပိုင်းဒေသိယစကား: ရှမ်းပြည်နယ် (လွိုင်ကော်၏ မြောက်ဖက်ပိုင်း)
တောင်ပိုင်းဒေသိယစကား: ဖရူးဆိုးမြို့နယ်နှင့် ဒီမောဆိုးမြို့နယ်များ (လွိုင်ကော်၏ တောင်ဖက်ပိုင်း)
အနောက်ကယား ဒေသိယစကားများသည် ထိုင်းနိုင်ငံမှ ပျံ့နှံ့လာသော အလယ်ကရင် မူကွဲများ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းများ ဖြစ်ကြသည်။ ယင်းတို့မှာ
အနောက်ကယား၏ မူကွဲတစ်ခုဖြစ်သော ယင်းတလဲဘာသာစကား ကို ကယားပြည်နယ်၊ ဘော်လခဲခရိုင်၊ ဖားဆောင်းမြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာ သုံးရွာတွင် ပြောဆိုအသုံးပြုကြသည်။ ယင်းတလဲဒေသိယစကားများမှာ ဘောလခဲနှင့် ဝမ်အောင်း တို့ ဖြစ်သည်။
ကော်ယော်ဘာသာစကား သည် အနောက်ကယားဘာသာစကားနှင့် ဆင်တူပြီး ကယားပြည်နယ် ဘော်လခဲမြို့နယ်နှင့် ဖရူးဆိုးမြို့နယ် နယ်နိမိတ်များရှိ ကျေးရွာ ၂၃ ရွာတွင် ပြောဆို အသုံးပြုကြသည်။ ကော်ယော် ဒေသိယစကားများမှာ တော်ခူ နှင့် ဒိုလိုဆို တို့ဖြစ်ကြပြီး အပြန်အလှန် နားလည်ရန် ခက်ခဲသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ အရှေ့ကယား at Ethnologue (18th ed., 2015)
အနောက်ကယား at Ethnologue (18th ed., 2015)
ယင်းတလဲ at Ethnologue (18th ed., 2015)
မနူမနော (မနု၊ ကော်ယော်) at Ethnologue (18th ed., 2015)
↑ Nordhoff၊ Sebastian; Hammarström၊ Harald; Forkel၊ Robert; Haspelmath၊ Martin, eds. (2013)။ "ကယား"။ Glottolog။ Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology။
↑ Nordhoff၊ Sebastian; Hammarström၊ Harald; Forkel၊ Robert; Haspelmath၊ Martin, eds. (2013)။ "ယင်းတလဲကရင်"။ Glottolog။ Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology။
↑ Nordhoff၊ Sebastian; Hammarström၊ Harald; Forkel၊ Robert; Haspelmath၊ Martin, eds. (2013)။ "မနုမနောကရင်"။ Glottolog။ Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology။
↑ Christopher Beckwith, International Association for Tibetan Studies, 2002. Medieval Tibeto-Burman languages, p. 108.
E-books for children with narration in Karenni။ Unite for Literacy library။ 2014-06-21 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကရင်နီဘာသာစကား&oldid=652959" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ ဧပြီ ၂၀၂၁၊ ၁၇:၅၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။